कोरोना संक्रमितको शवले पाएनन् कसैको साथ, साईकलमै एक्लै मसानघाट तिर। – कर्णाली 24 डट कम
कोरोना संक्रमितको शवले पाएनन् कसैको साथ, साईकलमै एक्लै मसानघाट तिर।
Karnali 24१५ बैशाख २०७८, बुधबार १७:२७
कोरोनाले महामारीको रुप लिएको भारतमा एक पछि अर्को हृदयविदारक तस्बिर सार्वजनिक भएका छन् । दुई दिन अघि आफ्नो श्रीमानलाई बचाउन महिलाले गरेको अन्तिम अवस्था सम्मको प्रयासको तस्बिरले सबैलाई रुवाएको थियो । उनले अक्सिजनको अभावमा जोखिममा परेका श्रीमानलाई मुखले अक्सिजन दिने प्रयास गरेकी थिइन् । तर उनका पतिको निधन भयो ।
अबिरल वर्षा संगै सुनकोशीको किनारमा शव फेला पर्ने थाल्यो।
२ असार २०७८, बुधबार १५:४६
ब्वाई फ्रेन्डले अरु सङ्ग घरजम गरेपछि प्रेमिकाले लेखाइन् यस्ताे अवतार।
२८ बैशाख २०७८, मंगलवार ११:०९
धनकुटामा मोवाइल चार्ज गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु १५ जना घाइते
५ बैशाख २०७८, आईतवार १६:२१
विषालु च्याउ खाँदा ८ वर्षीय बालकको मृत्यु
१३ श्रावण २०७७, मंगलवार ०७:५०
गायिका इन्दिरा जाेशिले काे संग गरिन् सुटुक्क इन्गेजमेन्ट? १५ बैशाख २०७८, बुधबार १७:२७
चितवनमा माेटरसाईकल “ग्राहकको मागअनुसार ब्राण्ड, रङ्ग, मोडल खोजी खोजी चोरी १५ बैशाख २०७८, बुधबार १७:२७
यस्तो हत्यारालाई के गर्नुपर्छ? ‘टाउको, घुँडाभन्दा तल र कम्मरभन्दा माथिको भाग अझै भेटिएको छैन्:प्रहरी १५ बैशाख २०७८, बुधबार १७:२७